अर्जेन्टिना कि ब्राजिल ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
अर्जेन्टिना कि ब्राजिल ?
धरानः कोपा अमेरिका कसको पोल्टामा जाला ? भनेर नेपाली दर्शकहरु पनि यतिबेला अड्कलबाजी गरिरहेका छन् ।
अहिले फुटबल फ्यानहरु आफ्नो मनपर्ने टोली, खेलाडीबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्, टोली, खेलाडीको फोटो पनि अपलोड गरिरहेका छन् । विश्व फुटबलका हाइप्रोफाइलका खेलाडी र राष्ट्र यसपटक कसको कोपा अमेरिकामा छन् र कसले उपाधि हुत्याउला भन्ने कौतुहलता सबैमा छ ।
४७ औं संस्करणको कोपा अमेरिका फुटबलमा दुई चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी ब्राजिल र अर्जेन्टिना भिड्दैछन् । ब्राजिलमा जारी प्रतियोगिताको फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार आइतबार बिहान ५ः४५ बजे शुरु हुनेछ । दुवै टोली समूह चरणबाट अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेका हुन् । सेमीफाइनलमा ब्राजिलले पेरुलाई १–० गोलले पराजित गर्दै फाइनल यात्रा सुनिश्चित गरेको थियो । यस्तै, अर्जेन्टिनाले कोलम्बियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३–२ गोलले हराएर फाइनल प्रवेश गरेको हो ।
फिफा वरियतामा अर्जेन्टिना ८ नम्बरमा रहेको छ भने ब्राजिल तेस्रो स्थानमा छ । दुवै टिममा विश्वका चर्चित क्लबहरुबाट फुटबल खेल्ने स्टार खेलाडीको बर्चस्व रहेकोले पनि खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन ब्राजिल घरेलु मैदानमा अजेन्टिनाविरुद्धको फाइनल खेल जित्दै उपाधि घरमै राख्ने दाउमा मैदान उत्रिनेछ । ब्राजिलले हालसम्म ९ पटक कोपा अमेरिकाको उपाधि हासिल गरेको छ । जसमा पछिल्लो पटक सन् २००४ र २००७ मा अर्जेन्टिनालाई फाइनलमा पराजित गर्दै ब्राजिलले उपाधि जितेको थियो ।
यस्तै, अर्जेन्टिनाले हालसम्म १४ पटक कोपा अमेरिकाको उपाधि हासिल गरिसकेको छ । सन् १९१६ मा आयोजित पहिलो संस्करणमा घरेलु मैदानमा पराजित बन्दै उपविजेता बनेको अर्जेन्टिनाले उपाधि जित्न नसकेको दशक वितेको छ । अर्जेन्टिनाले सन् २०११ मा पछिल्लो पटक कोपा अमेरिकाको उपाधि उपाधि हात पारेको थियो । त्यसयता अर्जेन्टिनाले ठूला प्रतितोयोगिता जित्न सकेको छैन ।
कोपाको ४७ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा नकआउट फरम्याटमा यी दुई टोली चौथो पटक फाइनल खेल्न लागेका हुन् । जसमा १९३७ मा अर्जेन्टिना विजयी भएको थियो भने २००४ र २००७ मा ब्राजिलले जित हासिल गरेको थियो ।
मेस्सी र नेयमारको भीडन्त
यी दुई टोलिबीचको फाइनल खेलमा दर्शकको आँखा भने समकालीन दुई सुपरस्टार मेस्सी र नेयमारको खेलमा हुनेछ । क्लब फुटबलमा स्पेनिस लिग बार्सिलोनामा सँगै खेलेका यी दुई खेलाडी पूर्व सहकर्मी हुन् । तर, आइतबार हुने खेलमा भने मेस्सी र नेयमार आफ्नो देशका लागि एकापसमा भिड्दैछन् । दुवै खेलाडी पहिलोपटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छन् ।
महान खेलाडीको दर्जामा गनिने ३४ वर्षीय लियोनल मेस्सीका लागि भने यो खेल अझ महत्वपूर्ण र खास रहेको छ । उनलाई बारम्बार देशका लागि नभएर क्लबका लागि मात्रै फुटबल खेल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । इतिहासले पनि मेस्सीलाई भाग्यले साथ नदिएको देखाउँछ । मेस्सीले सन् २००७, २०१५ र २०१६ को कोपा फाइनल हारेका छन् । यस्तै २०१४ को विश्वकपमा पनि फाइनलमा जर्मनीसँग १–० ले पराजित भएको थियो ।
सन् २०१८ मा सम्पन्न विश्वकपमा अर्जेन्टिना फ्रान्ससँग ४–३ गोल अन्तरले पराजित हुँदै अन्तिम १६ बाट बाहिरीएको थियो । त्यसबेला मेस्सीले निकै ठूलो आलोचना सहनुपरयो । यतिसम्मकी उनले आलोचनापछिको आत्मगलानीले राष्ट्रिय टिमबाट सन्यास लिनेसम्म बताएका थिए ।
यद्यपी यो संस्करणको कोपा अमेरिकाको लागि अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टिममा फर्किएका मेस्सीले जारी प्रितियोगितामा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन। उनले यस सिजन ४ गोल गर्नुका साथै ५ गोलका लागि ‘असिस्ट’ अर्थात अवसर बनाएका छन्। दुवै विधामा उनी शीर्ष स्थानमा छन् ।
यस्तै २४ वर्षीय नेयमार पनि घरेलु टोलिलाई उपाधि दिलाउन चाहन्छन् । दुई वर्षअघि ब्राजिलले कोपा अमेरिकाको उपाधि जित्दा उनी चोटका कारण टिमबाट बाहिरीएका थिए ।
२९ वर्षीय नेयमार पहिलो पटक आफ्नो उत्कृष्ट प्रर्दशनमा टिमलाई उपाधि दिलाउन चाहान्छन् । नेयमार जारी प्रतियोगितामा २ गोल र ३ असिस्ट गरेर गोल्डेन बुट विजेताको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा छन् । दुई वर्षअघि घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको ब्राजिलले भने अहिलेसम्म ९ पटक मात्र कोपा जितेको छ र सर्वाधिक जित्नेमा तेस्रो स्थानमा छ । ब्राजिल लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ ।
मेस्सी घनिष्ट मित्रः नेइमार
नेमारले मेस्सी आफ्नो घनिष्ठ मित्र भएको बताएका छन्। उनले मेस्सी विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी भएको पनि स्वीकारेका छन्।
यद्यपी उनले आइतबार हुने खेलमा भने मेस्सी आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी भएको र आफूले ब्राजिलको लागि पहिलो कोपा अमेरिका जित्न अर्जेन्टिनालाई हाराउनु पर्ने बताए।
‘मेस्सी मैले देखेको सबैभन्दा राम्रा खेलाडी हुन् र उनी मेरा एक महान साथी पनि हुन्, तर अब हामी फाइनलमा छौं, हामी प्रतिद्वन्द्वी हौं’ उनले भनेका छन्,‘म मेरो जीवनकै पहिलो कोपा अमेरिका जित्न चाहन्छु।’
‘मेस्सीले कयौं वर्षदेखि राष्ट्रिय टिमबाट पहिलो उपाधि प्रतिक्षा गरिरहेका छन्। जब हामी प्रतिस्पर्धामा थिएनौं मैले उसलाई समर्थन जनाए। सन् २०१४ को विश्वकपमा पनि म मेस्सीको साथमा थिए’ उनी भन्छन्,‘तर अहिले हामीबीच जस्तो सम्बन्ध र सम्मान भएता पनि उपाधि एक जनाले मात्र जित्छ।’
‘जब तपाइँ कसैसँग साथी बन्नुहुन्छ त्यो भुल्न गाह्रो हुन्छ तर जब हामी भिडिओगेम खेल्छौं हामी जित्न नै चाहन्छौं। आइतबार पनि त्यसै हुनेछ’ उनले भनेका छन्।
सन् २०१९ मा ब्राजिलले कोपा अमेरिका जित्दा नेमार घाइते भएका कारण टोलीमा थिएनन्। मेस्सीले तीनपटक कोपा अमेरिकाको फाइनल खेलिसक्दा पनि यो उपाधि उचाल्न सकेका छैनन् ।